Waxaan Aad Ugu Faraxsanahay in Maanta la Doondoonayo Tuuggii Ummadda Dilay – Rasaasa News
Oct 1, 2009 Ina Cumar Cismaan
Warqadaha dadweynaha naga soo gaadha oo la go,aansaday in la soo daabaco, cidii codsatana magaceeda la soo raaciyo. Hadaba qoraalkan hoose ayaa waxaa uu naga soo gaadhay akhriste ka mid ah akhristeyaalka bogga rasaas.
“Waxaa farxad weyn noo ah kolkba hadii maanta tuugii Ina Cumar Cismaan ahaa ay ummada oo dhan wada doonayso in abaalkii la mariyo, waxaa uu ummada u gaystay bililiqo uu ku baabiìyay maantana waxaan is leenahay aad meel uun ka heshaan” erayadaas waxa yidhi mid ka mid ah akhristayaalka bogga rasaas.com. Waxaad ummada Somalida Ogadeeniyaay ku tala gashaan anagu dad ahaan ama reer ahaanba [reer cali] in aan go,ansanay in Ina cumar Cismaan aanaan dilkiisa ku daalin laakiin aan dusha ka calaameynay in wiilashiisa iyo gabadhiisa aan loo ogolaan nolol ka dambeysa isaga iyo if dambe oo ay arkaan waa arrin sugi Ina cumar Cismaan iyo reerkiisa intaba. Waayo isaga ayaa hore ugu tabcay dhibaato ubadkiisa, ka dib kolkii uu laayey dad aan waxba galabsan, Itobiya lama uusan diriraynin runtii ee wuxuu la dirirayey beelo ay walaalo yihiin, waa kuwa ugu horeynba xabada ku bilaabay.
Cobole, Itobiya ma joogin ee waxaa joogay nin iyo qoyskiis beer ka abuuranayey tuuladooda, Janeeskana isagaa keenay ninkaasi, sababta uu Ina Cumar Cismaan u laayey maxay ahayd.
Waxaan hubaa in ay u ahaan doontaa maalin madow oo aan la haalmaami doonin, aad ayuu u xasuusan doonaa tuu u geystay yar iyo weynba dhallinyarada ree Ogaadeenya, gaar ahaan reer cali dalal guuleed, waa arrin mudan in majaraheeda la raaco, waxaana ballan ah in wiilashiisa marka hore la xaniinyo siibo gabdhahana xxx laga jaro waa sida uu hore noogu galay, ma halmaami doono in aan u aar goosanno sida uu u dhaqmay.
Waxaa uu heli abaalkii uu Ina Cumar Cismaan u gastay dadka ree Ogaadeeniya, waa maalin aan dheereyn lana wada daawan doono, maanta waan karnaa in aan waxyeelo u gaysano, laakiinse waxaan ka xumahay in aanaan rabin rabin arintaas, laakiin maalinka aad maqashaan geerida Bakhtiga Ina Cumar Cismaan waa ballan in aad si aad ah oo qiima badan u daawan doontaan una raaxeysan doontaan, waayo wuxuu colaad iyo shaki dhax dhigay dadka walaalaha ah ee dega gabalka Dhagaxbuur.
Waxaan leenahay silica Ina Cumar Cismaan uu ku jiro maanta ha ka kala khafiifinina, oo si aad u adag ha u silco, hana laba geeriyoodo,waa sidii uu damacsanaa, waa aayahii uu ku fekeri jiray.
Waxaa xusid mudan in maanta uu xasuustay Godkii uu u qoday Xaaji Ibraahim Xaad ama ninkii dhisay horumarka yar ee ka jira gabalka Dhagaxbuur iyo Somalida kililka 5aad, oo ahaa Ibraahim Xaad. Waana ninkii aanu wada sugeynay in uu dib u soo madax banaanaado, xorriyaddiisana dib u helo Ilaah ha nagu simo, hana natuso munaasibadda aan wada jecelnahay.
Maanta ayuu ku dhawaaqay Ra,iisul wasaaraha Ethiopia in rag uu ka mid yahay Xaaji Ibraahin iyo rag kale la sii siideyn doono waa arin cusub farxadna leh oo loo baahan yahay in aan isku dhan ka fiirino isku sina u qorsheyno.
qoraal aad u ballaaran oo ka hadlaya arrimaha xasaasiga ah ee maanta taagan iyo qorshaha Ina cumar Cismaana ku dhex jiro ayaan idiin soo gubindoonaa.
Waa Maxamed Axmed Askar